Ukuseta isikhangeli esingagqibekanga kwi-iPhone 🥇 yesiphelo.online ▷ 🥇
Ngokufika kohlaziyo lwe-iOS 14 lwe-iPhone, kunokwenzeka ukuba utshintshe usetyenziso olungagqibekanga ukuvula iiwebhusayithi kunye nokunxibelelana ngaphakathi kwe-imeyile, izingxoxo kunye neenethiwekhi zentlalo, ngaphandle kokuya kwisicelo seSafari (uhlala ukhangela okungagqibekanga kuzo zonke Iimveliso zeapile). Oku kunokubonakala kuyinto encinci kwaye icacile, ngakumbi ukuba sivela kwihlabathi le-Android, kodwa enye yezona zinto zinamandla / ubuthathaka buka-Apple ngokuchanekileyo yayikukubophelela okuqinileyo kunye nokusetyenziswa kwenkqubo ye-Apple, engenakujongwa ngokupheleleyo. Ukuba oku kunokubonwa njengenzuzo yokugcina i-Apple ecosystem ihambelana ngakumbi, iyithintela ngokuqatha inkululeko yomsebenzisi, ongakwaziyo ukuvula amakhonkco kunye nesikhangeli asithandayo.
Umculo ubonakala ngathi utshintshile ngolu hlaziyo: masibone kunye ukuseta njani isikhangeli esingagqibekanga kwi-iPhone, ukhetha phakathi kwezinto ezininzi ezikhoyo kwiVenkile ye App (ukusuka kuGoogle Chrome ukuya kwiMozilla Firefox, Opera kunye nesikhangeli esingaziwayo seDuckDuckGo).
Kwizahluko ezilandelayo siza kukubonisa kuqala ukuba ujonga njani uhlaziyo lwenkqubo kwi-iPhone yethu kwaye, kuphela emva kokufumana ifayile ye- Inkqubo ye-14 XNUMX yokusebenza, sinokuqhubeka nokufaka isikhangeli sethu kwaye senze utshintsho oluyimfuneko ukuze siyenze ibe ngumkhangeli zincwadi kwi-iPhone yethu.
Uhlaziya njani i-iPhone
Ngaphambi kokuqhubeka, sihlala sicebisa oko jonga uhlaziyo lwe-iPhone, ngakumbi ukuba asikaze siqaphele naluphi na utshintsho lwenguqu okanye uhlaziyo kwiintsuku okanye kwiinyanga zokugqibela. Ukuhlaziya i-iPhone, qhagamshela kwinethiwekhi ye-Wi-Fi ekhawulezileyo (ekhaya okanye eofisini), cinezela usetyenziso Ulungelelwaniso, masiye kwimenyu ngokubanzi, siyaqhubeka Uhlaziyo lwesoftware kwaye, ukuba kukho uhlaziyo, fakela ngokucinezela Khuphela kwaye ufake.
Ekupheleni kokukhuphela siqala kabusha i-iPhone kwaye silinde inkqubo yokusebenza entsha ukuba iqale; ukuba akukho hlaziyo kwi-iOS 14 (mhlawumbi kuba i-iPhone yethu indala kakhulu), asinakwenza utshintsho kwisikhangeli esingagqibekanga. Ngolwazi oluthe kratya, sicebisa ukuba ufunde isikhokelo sethu. Uhlaziya njani i-iPhone. Ukuba endaweni yoko sifuna ukutshintsha i-iPhone yethu entsha okanye eyakhiwe ngokutsha kodwa ehambelana ne-iOS 14, siyakumema ukuba ufunde isikhokelo sethu Yeyiphi i-iPhone ekufanele ukuyithenga namhlanje? Iinguqulelo kunye neemodeli ezikhoyo.
Uyifaka njani okanye uyihlaziya njani ibrawuza yomntu wesithathu
Emva kokuhlaziya i-iPhone, sifaka ibrawuza yethu esiyithandayo ngokuvula iVenkile ye App kunye nokusebenzisa imenyu search, ukuze ukhangele iGoogle Chrome, iMozilla Firefox, iOpera Touch, okanye isikhangeli seDuckDuckGo.
Ukuba sele sinesikhangeli esinye okanye ezingaphezulu ezifakwe kwi-iPhone yethu, ngaphambi kokuqhubeka nesona sahluko sibalulekileyo sesi sikhokelo, qiniseka ukuba zihlaziywa kwinguqulelo yamva nje ngokuvula iVenkile ye App, ngokucinezela uphawu lweprofayile yethu ekunene kwaye ekugqibeleni ucofa Hlaziya konke. Ngaba siyazazi ezinye iindlela zokukhangela kwiSafari? Singayilungisa le nto ngoko nangoko ngokufunda isikhokelo sethu Ezona zikhangeli zilungileyo ye-iPhone kunye ne-iPad ezizezinye kwi-Safari.
Ungayiseta njani isikhangeli esitsha esingagqibekanga
Emva kokukhuphela okanye ukuvuselela isikhangeli somntu wesithathu kwi-iPhone, singayiseta njengesikhangeli esingagqibekanga kwikhonkco ngalinye okanye iphepha lewebhu esiza kulivula ngokusisa kwisicelo. Ulungelelwaniso, uskrola ude ufumane igama lesikhangeli kwaye, xa sele uvuliwe, cinezela kwimenyu I-app engagqibekanga yesikhangeli kwaye wenze ukhetho lwethu kolu luhlu.
Ukucofa kwigama lesikhangeli kuzakubonisa uphawu lokutshekisha, uphawu lokuba inkqubo ilwamkele utshintsho. Asiboni isikhangeli sethu kuluhlu okanye into ayiveli I-app engagqibekanga yesikhangeli? Sijonga ukuba isikhangeli kunye nenkqubo yokusebenza ihlaziyiwe (njengoko kubonisiwe kwizahluko ezidlulileyo), kungenjalo ngekhe kwenzeke ukwenza ukhetho.
Ngolu tshintsho lincinci, iApple izama ukuphuma ebhokisini kwaye isondele kubhetyebhetye kunye nokusebenza okubonwe kuyo nayiphi na i-smartphone yanamhlanje ye-Android. Ngapha koko, nge-iOS 14 asibophelelwanga ekusebenziseni iSafari kwikhonkco ngalinye elivulwe kwii-imeyile okanye kwiingxoxo, esivumela ukuba sisebenzise isikhangeli sethu osithandayo nanini na xa kukho imfuneko. Oku kunokubonwa njenge "isiqingatha soguquko" okanye endaweni yoko "Uguquko": UApple ufumanise ukuba abasebenzisi bayo abasoloko bebotshelelwe kwizicelo ezizivelisayo kwaye, kumaxesha amaninzi, basebenzisa iSafari kuba Inkqubo ayenzi. ungasebenzisa ezinye izikhangeli ngokwendalo (ngoku enokwenzeka nge-iOS 14). Ukongeza kwisikhangeli, utshintsho olungagqibekanga lwesicelo lukwakhona kwezinye iinkqubo zenkqubo ezinjengeMeyile: ke ngoko, sinokuvula ii-imeyile zethu okanye iziqhoboshelo nabanye abathengi ngaphandle kokuya kwinkqubo yezicelo ezinxulunyaniswe nemeko ye-Apple (i ngokukhawuleza kodwa hayi rhoqo enemisebenzi emininzi).
Ukuba sifuna ukutshintsha ii -apps ezizenzekelayo kwi-smartphone ye-Android, sicebisa ukuba ufunde isikhokelo sethu Ungazitshintsha njani ii-default zokusebenza kwi-Android. Sihlala sisebenzisa Windows 10 ikhompyuter kodwa andazi ukuba ungayitshintsha njani inkqubo emiselweyo? Kule meko sinokunceda ngamanyathelo achazwe kwisikhokelo sethu. Ungalutshintsha njani usetyenziso olungagqibekanga ngaphakathi Windows 10.
Ngaba asifuni ukushiya i-Safari ngaphandle kweblue okanye ngaba sisayijonga njengeyona bhrawuza ilungileyo ye-iPhone? Kule meko sinokuqhubeka nokufunda kwinqaku lethu Amaqhinga eSafari kunye neempawu ezingcono ze-iPhone kunye ne-iPad, ke unokufunda kwangoko amaqhinga ahlukeneyo aluncedo kunye nemisebenzi efihliweyo ukuze uqhubeke nokusebenzisa esi sikhangeli.
Uyenza njani uluhlu lokudlala kwiYouTube